Home Wararka Maxkamadda ku taal Kenya oo diiday in la joojiyo kiiska dacwada ee...
Maxkamadda ku taal Kenya oo diiday in la joojiyo kiiska dacwada ee Kenya iyo Soomaaliya
Saddex garsoore oo Kenyaan ah ayaa gebi ahaanba diiday codsi ah in laga horjoogsado Kenya inay ka qeybgasho maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda (ICJ) ee muranka badda ee Soomaaliya.
Garsoorayaasha Kanyi Kimondo, Robert Limo iyo Anthony Mrima ayaa xusay in arimihii la xiriira kiiska dacwada ee Soomaaliya iyo Kenya ee ay soo gudbiyeen qareeno u dhashay Kenya, iyagoo ku doodaya in kiiska lagu dhameyn karo qaab diblomaasiyadeed, intii kiiska la gelin lahaa faragelin dhinaca sharciga ah taasoo haddii Kenya looga guuleysto ay suuro gelineyso in Kenya ay ka tanaasusho Baddeeda waxayna ku doodayaan in kiiskan uu yahay mid sharci darro ah oo aan boos uga bannaaneyn in ay dacwada dhageysato Maxkamadda Caalamiga ah ee Hugue.
Tani waxay ka dhigan tahay in Kenya aysan ka laaban doonin kiiska badda. 20 ka mid ah codsadeyaasha ayaa ku dooday in ka soo qeyb galka Xeer ilaaliyaha guud ee dacwadu ay noqonayso mid lagu xusayo madaxbanaanida Kenya.
Garyaqaan Kibe Mungai, waxay sheegeen in Kenya ay halis galisay qayb ka mid ah dhulkeeda hadii maxkamada ICJ ay xukunto in somalia ay leedahay badda la isku hayo.
Garyaqaanka ayaa sheegay in ay tahay in ay dawladu mudnaanta koowaad siiso danahaheeda qaran, iyo in sida kaliya ee taa loo sameeyo ay tahay iyada oo aan dooneynin in ay tanaasuliso midnimada dhulkeeda ee Kenya.
Go’aanka ayaa lagu sheegay, si kastaba ha ahaatee, in, “kaqeybgalka xeer ilaaliyah guud ee Keya ee dacwadaha waxay fursad u siineysaa fursad ay ku tusto maxkamada in carqaladeynta dastuuriga ah ee Kenya ay ku leedahay hirgalinta go’aanka hadii ay dhacdo in muranka la xaliyo Soomaaliya.”
Waxay si toos ah ula xiriirtay midowga Afrika, iyagoo raadinaya wadaxaajood ka baxsan maxkamad.
Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, ICJ ayaa dacwada ka dhigtay in la dhageysto bisha Juun 8, 2020, kadib codsi ka yimid Kenya.
Bishii Sebtember 2019, Kenya waxay codsatay in dib loo dhigo illaa hal sano, iyadoo sheegtay in loo baahan yahay waqti si dib loogu dhiso qareenada difaacaya Kenay.
Maxkamaddu waxay oggolaatay Kenya laakiin waxay ka digtay inaysan jiri doonin dib u dhac kale.